ईश्वरका बारेमा के भन्थे बुद्ध? :: Setopati
भिक्षु कश्यप वैशाख ७
अनन्त विशाल अस्तित्वलाई इंगित गर्न भव, सृष्टि, ब्रह्माण्ड, संसार, जगत लगायत अनेक शब्द छन्। समानअर्थी शब्द भए पनि यी सुक्ष्म रूपमा फरक छन्। जस्तो भवले 'यो अनन्त विशाल अस्तित्व छ' मात्र जनाउँछ। सृष्टिले 'यो अनन्त विशाल अस्तित्व छ, किनकी कसैले सृष्टि गरेको छ' भन्ने बुझाउँछ।
भव वा सृष्टिका बारेमा मानिसमा आदिकालदेखि नै कौतुहलता रहँदै आएको छ। भव अनादिकालदेखि छ कि आदिकालमा सुरू भएको हो? भव वा सृष्टि स्वयम्भू (आफैं निर्मित) हो कि यसको सृष्टिकर्ता कोही छ?
छ भने, उसले कुन उद्देश्यले सृष्टिको रचना गर्‍यो? अनि सृष्टि छ भने त्यो सृष्टिकर्ता कहिलेदेखि छ? अनि सृष्टिकर्तालाई पनि अरू कसैले बनायो कि ऊ स्वयम्भू हो?
हिन्दु धर्मअनुसार यो संसार रचना ब्रह्माले गरे भन्ने छ। इश्लाम, इसाई लगायतमा परमप्रभुले गरे भनिएको छ। आजका वैज्ञानिकहरू यो उत्तरसँग सहमत छैनन्।
यो लेखमा भने मैले बुद्ध र ईश्वरबारे चर्चा गरेको छु।
बुद्धले आफूलाई ईश्वर या ईश्वरका अवतार, दूत वा पुत्रका रूपमा मानेका छैनन्। उनले आफूलाई कल्याण मित्र वा गुरू वा मार्गदर्शकसम्म भनेका छन्।
बुद्धले ईश्वरबारे के भनेका छन् त?
बुद्धले ईश्वरलाई सृष्टिकर्ताका रूपमा स्वीकारेका छैनन्।
बुद्ध भन्छन्, 'ईश्वर एउटा कल्पना मात्र हो। त्यसैले ईश्वरलाई मान्नेहरू धर्म-पन्थहरू उपयोगी छैनन्।'
उनको तर्कमा ईश्वरवादको सिद्धान्त सत्यमा आधारित छैन। बुद्धले ईश्वरका विषयलाई सामान्य रूपमा अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, यसका अनेक पक्षका तर्कसंगत दृष्टिले ईश्वरको पूर्ण खारेजी गरेका छन्।
बुद्धकालीन एक घटनाः
एकदिन बिहान आनन्द र स्वास्तीका साथमा बुद्ध एक गाउँमा भिक्षाटनका लागि गएका थिए।
त्यत्तिकैमा एक व्यक्ति आएर बुद्धलाई सोधे, 'बुद्ध, म नाश्तिक हुँ, ईश्वरलाई मान्दिनँ। तर पनि म कति दिनदेखि चिन्तित छु। तपाईंलाई के लाग्छ बुद्ध, के ईश्वर छ?'
बुद्धले आनन्द र स्वास्तीलाई हरेरे मुसुमुसु हाँसे र निकै सहानुभूति आवाजमा भने- तिम्रो धारणा गलत छ। यस अस्तित्वमा सिर्फ ईश्वर नै ईश्वर छ, अरू केही छैन। आँखा बन्द गरेर हेर र खोज त एक पटक!
ती व्यक्ति बुद्धलाई नमस्कार गरेर हिँडे।
बुद्ध गाउँको गोरेटोमा अगाडि बढ्दै थिए।
त्यस्तैमा कुनै अर्का व्यक्ति आए र सोधे, 'बुद्ध म आश्तिक हुँ, ईश्वरलाई मान्छु। मलाई लाग्छ ईश्वर छ, तर पनि कति दिनदेखि चिन्तित छु। तपाईंलाई के लाग्छ बुद्ध, के वास्तवमै ईश्वर छ?'
बुद्धले फेरि आनन्द र स्वास्तीलाई हरेरे मुसुमुसु हाँसे र भने- गलत मान्यता हो तिम्रो। यो अस्तित्वमा ईश्वर जस्तो कुनै चिज छैन।
ती व्यक्ति पनि बुद्धलाई नमस्कार गरेर हिँडे।
बुद्धका जवाफ सुनेर आनन्द र स्वास्ती अचम्म परे, एकै प्रश्नको दुई विपरीत जवाफ!
'बुद्धको प्रायोजन के हो यसरी एकै प्रश्नको दुई विपरीत जवाफ दिनुमा?' साँझ सबै मानिस गएपछि फुर्सदमा सोधुँला भन्ने ठाने आनन्दले। तर साँझ आनन्दको मुश्किल झन् थपियो।
साँझ एक गाउँनजिक उनीहरू वास बसे। तब अचानक एक व्यक्ति आए, डराउँदै बुद्धनजिक गएर प्रणाम गर्दै सोधे, 'बुद्ध, मलाई ईश्वर छ कि छैन भनेर थाहा छैन। म ईश्वरलाई खोज्दा खोज्दा हैरान भइसकेँ। कृपया मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्।'
यसपालि बुद्धले जवाफ दिएनन्, मौन रहे, आँखा बन्द गरेर बसे।
ती व्यक्ति पनि नमस्कार गरेर हिँडे।
अब आनन्द र स्वास्तीको आश्वर्यको सीमा रहेन।
आनन्दले आफूलाई रोक्न सकेनन् र सोधे, 'बिहानदेखि साँझसम्म तीन व्यक्ति एकै किसिमका प्रश्न लिएर आए। तपाईंले तीनै जनालाई अलग अलग जवाफ दिनुभयो। केही बुझ्न सकिनँ।'
बुद्ध मुसुमुसु हाँसे र जवाफ दिए- पहिलो व्यक्तिले ईश्वर छैन भन्ने मानेको थियो। म उसको मान्यता हटाउन चाहन्थेँ ताकि उसले खोज सुरू गरोस्। ईश्वर छैन मानेर नबसोस्, ऊ सत्यसम्म पुगोस्। दोस्रो व्यक्तिले ईश्वर छ भन्यो। मैले उसको मान्यतामा आधारित धारणा हटाउन खोजेँ। ऊ पनि खोज जारी राखोस्, ईश्वर छ कि छैन भनेर। तेस्रो व्यक्ति अझै संशयमा छ। उसले खोज जारी राखेको छ, त्यसैले म मौन रहेँ। मौन रहनु उचित थियो।
यसबाट बुझिन्छ, बुद्ध चाहन्छन्, मानिसहरू आफ्नो जड मान्यताबाट माथि उठून्, मान्छेले आफ्ना अन्धविश्वासका जरा काटून्, मान्यता ढालून्, आफैं सोच्न थालून्, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न बाध्य बनून्। न कि शास्त्रका अप्रमाणित मान्यतामा विश्वास गरेर आफ्ना चेतनालाई बन्धक बनाइराखून्।
त्यसैले बुद्ध भन्छन्- यो संसारमा कुनै पनि कुरा मानेर हिँड्नेहरू जान्नबाट चुक्छन्। उनीहरूको विकास रोकिन्छ जो स्वयंले बोध गर्दैनन्। उनीहरू सत्यसम्म कहिल्यै पुग्न सक्दैनन्।
बुद्धकालीन दोस्रो घटनाः (वि आर आम्बेडकरको 'बुद्ध और उनके धम्म' पुस्तकको एक अंश)
एकपटक वासेट्ठ र भारद्वाजमा एउटा विवाद उठ्यो- सत्य मार्ग कुन हो र झुटो मार्ग कुन हो?
त्यो समय बुद्ध भिक्षु संघसँगै कौशल जनपदमा विहार गर्दै थिए। बुद्ध मनसाकत नामक एक ब्राह्मण गाउँको अचिरवती नदी किनारमा बास बसेका थिए। वासेट्ठ र भारद्वाज दुवै मनसाकत गाउँवासी थिए।
उनीहरूले बुद्ध आफ्नै बस्तीमा आएका छन् भन्ने सुनेपछि बुद्धकहाँ गए।
भारद्वाजले भने, 'तरूक्ख (त्यतिबेलाका कुनै अर्का गुरु) ले देखाएको मार्ग सिधा छ, त्यो मुक्तिका लागि सिधा मार्ग हो र जो यो मार्गको अनुसरण गर्छ ऊ सिधा ब्रह्म (ईश्वर) मा लिन हुनसक्छ। ब्रह्म प्राप्ति गर्न सक्छ।'
वासेट्ठले भने, 'धेरै गुरु धेरै थरीका मार्ग बताउँछन्। उनीहरूले बताएका मार्गको अनुशरण गर्नेहरू सबैलाई ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ। जसरी कुनै गाउँ जाने अनेक मार्ग हुन्छन् तर सबैले गाउँ नै पुर्‍याउँछन्, त्यसरी नै ती ब्राह्मणले भनेका मार्गले पनि ब्रह्ममा पुर्‍याउँछन्।'
बुद्धले सोधे- वासेट्ठ, यी सबै सही छन् त?
वासेट्ठ भन्छन्, 'हो, मेरो यही मान्यता छ।'
बुद्ध भन्छन्- तर के तीनवटै वेदका जानकार ती गुरुमा कुनै एक जना छन् जसले ब्रह्मलाई आमनेसामने देखेका छन्?
वासेट्ठ, 'निश्चित पनि छैनन्!'
बुद्धले भने- तब तिमी कसरी मान्न सक्छौ कि यी गुरुको कथन सत्यमा आधारित छ? आँखा नदेख्नेहरूको लाममा अगाडि हिँड्नेले पनि देख्न सक्दैन, बीचमा हिँड्नेले पनि देख्न सक्दैन र पछाडिकोले पनि सक्दैन। यो गुरुहरूको कथा त्यस्तै हो। न अगाडि हिँड्नेले ब्रह्म देख्या छ, न बीचमा हिँड्नेले, न पछाडिकाले। यो निकै हास्यास्पद छ, यसमा कुनै सार छैन।
वासेट्ठले भने, 'हो, यस्तै छ।'
सृष्टिका तथाकथित रचयिताबारे चर्चा गर्दै बुद्धले भने- जो प्राणी सबभन्दा पहिला अस्तित्वमा आएको थियो, उसले म नै ब्रह्म, विजेता, निर्माता, अविजित, सर्वाधिकारी, मालिक, रचयिता, व्यवस्थापक हुँ र आफ्नो स्वामी पनि आफैं हुँ भन्ने सोच्यो। जो अहिले छन् र जो भविष्यमा हुनेवाला छन्, ती सबै प्राणिका पिता म हुँ, म नै यी सबै प्राणीका सृष्टिकर्ता हुँ भन्ने ठान्यो।
वासेट्ठले भने, 'यसको यही मतलब हुन्छ, अहिले जो छन्, जो भविष्यमा हुनेवाला छन्, ती सबका पिता ब्रह्म हुन्।'
बुद्धले फेरि भने- तिम्रो भनाइअनुसार जो छन् र हुनेवाला छन् उनीहरूका सबैका पिता ब्रह्म हो। ऊ स्थायी, नित्य, अपरिवर्तनशील छ र अनन्त कालसम्म नित्य रहनेछ। उसो भए ब्रह्मले नै सृष्टि गरेका हामी सबै किन अनित्य, परिवर्तनशील, अस्थिर, अल्पजीवी र मरणाधर्मी?
वासेट्ठसँग उत्तर थिएन।
बुद्ध भन्दै गए- यदि ईश्वर असल र दयालु छ भने व्यक्ति कुकर्मी किन हुन्छ? कुनै यस्तो न्यायी, दयालु र महान सृष्टिकर्ता हुँदाहुँदै संसारमा यति धेरै अन्याय र विभेद किन भइराखेको छ?
बुद्धको आशय थियो, सर्वज्ञानी र सबैलाई देख्न सक्ने ईश्वरले संसारको दर्दनाक हालत देखेर यसमा सुधार किन गर्दैन? उसमा असीम शक्ति भए उसका हात किन कल्याणकारी भएनन्? उसकै सृष्टिले किन दु:ख भोगिरहेको छ?
बुद्ध अगाडि भन्छन्- यदि सबै प्राणीमाथि शक्ति राख्नसक्ने सर्वशक्तिमान ईश्वर छ भने, कर्ताधर्ता नै ईश्वर हो भने मानिस उसको कठपुतली मात्र रहन्छ। मानिस आफ्ना असल-खराब कामको जवाफदेही हुन सक्दैन किनकी ईश्वरको चलन-खटनमा छन् सबै। नभए प्राणी ईश्वरको आज्ञामा छैनन् भन्ने हुन्छ। यसो हुँदा ईश्वर कसरी सर्वशक्तिमान भयो? त्यसैले ईश्वर कि त असल र न्यायी छैन, कि संसार नदेख्ने छ।
ईश्वर अस्तित्वका विरूद्धमा बुद्धका आखिरी तर्क 'प्रतीत्य-समुत्पाद सिद्धान्त' अन्तर्गत आएको छ। यस सिद्धान्त अनुसार ईश्वरको अस्तित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न मुख्य होइन। न यो सृष्टिको रचना ईश्वरले गरेको हो वा होइन भन्ने।
खास प्रश्न यो छ कि, ईश्वरले सृष्टि कुन प्रकारले गर्‍यो? ईश्वरले सृष्टि कुनै पदार्थबाट उत्पन्न गर्‍यो या शून्यबाट? शून्य अर्थात् केही पनि छैन (अभाव) बाट केही (भाव) रचना गर्न त कसरी सम्भव होला?
होइन, ईश्वरले सृष्टि रचना केहीबाट गरेको भए, ईश्वरले नयाँ केही बनाएको होइन। उसले बनाउनु अगाडिदेखि नै केही अस्तित्वमा छ। त्यसैले ईश्वरलाई रचयिता स्वीकार गर्न सकिन्न। ईश्वर सृष्टिको आदिकारण हुन सक्दैन।
सृष्टि अनादि छ भने सृष्टिलाई कुनै (सृष्टि) कर्ताको जरूरत परेन। कर्ता हुन ईश्वरलाई कार्यभन्दा पहिले उपस्थित रहनुपर्छ। सृष्टि अनादि होइन, पछि मात्र बनाइएको हो भने अनन्तकालदेखि सृष्टि उत्पन्न हुने समयसम्म त्यो क्रिया रहित ईश्वर थियो भन्ने प्रमाण के? र, उसले के सनकमा एकदिन सृष्टि खडा गर्‍यो?
ईश्वर अस्तित्वको सिद्धान्त विरूद्धमा बुद्धको अर्को तर्क यो थियो- ईश्वरको चर्चा गरेर कुनै प्रयोजन सिद्ध हुँदैन।
बुद्धको विचारमा धर्मको मूल ईश्वर र व्यक्तिबीचको सम्बन्धमा होइन, व्यक्ति व्यक्तिबीचको साथ र सम्बन्धमा हुन्छ। कुनै पनि धर्मको प्रयोजन एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिसँग राम्रो र आदरपूर्ण व्यवहार गर्न सिकाउनु हो। ताकि मानिसले आफ्नो चित्त वा मन शुद्ध राखोस्, प्रज्ञा जगाओस्, अज्ञानताको अन्धकार हटाओस्।
बुद्धको दृष्टिमा ईश्वरको अवधारणा सम्यक्‌ दृष्टि (सही दर्शन, सत्य दर्शन) मार्गको अवरोधक हो। यही कारण बुद्ध रितीरिवाज, प्रार्थना, कर्मकाण्ड र पूजा जस्ता कामका विरोधी थिए।
वास्तवमा धर्म बुझ्न गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ। पहिलेपहिले सीमित मान्छेले, सीमित ठाउँमा मात्र पढ्न पाउँथे। ज्ञानका निम्ति गुरुहरूको प्रवचनमा आश्रित हुनुपर्थ्यो। केही गुरुले काल्पनिक आस्था, चमत्कार र कर्मकाण्डमा अल्झाएर आम जनतालाई सत्यबाट टाढै। जब कुनै व्यक्तिको जीवनमा भिषण दुःख वा परालौकिक घटना भए, ईश्वररूपी काल्पनिक सहारा खडा गरेर उसलाई सान्तवना दिइयो।
महापण्डित राहुल सांकृत्यान आफ्नो किताब 'वोल्गादेखि गंगासम्म' मा लेख्छन्- अज्ञानको अर्को नाम नै ईश्वर हो। हामी आफ्नो अज्ञानलाई साफ स्वीकार गर्न लाज मान्छौं। अतः त्यसका लागि संभ्रान्त नाम 'ईश्वर' खोजेर ल्याएका हौं। ईश्वर-विश्वासको अर्को कारण मनुष्यको असमर्थता र लाचारपन हो।
बुद्धको जीवनको अर्को घटनाः
मौलुंकपुत्त एक ठूला दार्शनिक थिए। उनका हजारौं शिष्यमध्ये पाँच सय प्रतिष्ठित शिष्य लिएर उनी बुद्धसँग ईश्वरका बारेमा विवाद गर्न गए। उसले यसमा कयौं धुरन्धरलाई पराजित गरिसकेका थिए।
बुद्धले उनलाई भने- संवाद, विवाद तिमीले जीवनभर गरिरह्यौ, के पायौ त अहिलेसम्म? ईश्वरका वादविवाद गरम्ला तर उचित समयमा। अहिले तिमी अनुचित स्थान र समयमा वादविवादको निमन्त्रणा गर्दैछौ। जीवन रहस्यबारे तिमीलाई केही थाहा छैन। एउटा शर्त मान्छौ भने म वादविवादका निम्ति तयार छु। दुई वर्ष मसँग चुपचाप बस र जे हुन्छ (आफ्नो मन र शरीरमा) त्यसलाई हेरी मात्र राख। हजारौं मानिस आउनेछन्, जानेछन्, दीक्षित हुनेछन्, भिक्षु हुनेछन्, रूपान्तरित हुनेछन्। तर तिमी एक शब्द बोल्ने छैनौ। चुपचाप बसिराख्ने छौ। दुई वर्षपछि ठीक समयमा मै तिमीलाई वादविवादको समय आएको भनुँला।
बुद्ध र मौलुंकपुत्तको कुराकानी बुद्धका एक पुराना शिष्य महाकश्यपले सुने र जोडसँग हाँस्न लागे।
मौलुंकपुत्तले भने, 'यी हाम्रो कुरा सुनेर किन हाँसिरहेका छन्? मौन व्रतमा प्रवेश गर्नुअघि यिनको हाँसोको कारण थाहा भएन भने मलाई दुई वर्षसम्म कुनै कीराले जस्तो खाइरहने छ।'
बुद्धले महाकश्यपलाई हाँस्नुको कारण सुनाउन भने।
महाकश्यपले भने, 'मौलुंकपुत्त, बुद्धलाई ईश्वरका बारे सोध्नु नै छ भने अहिले नै सोधिहाल। किनकी म पनि यसरी नै एकदिन प्रश्न गर्न आएको थिएँ। दुई वर्ष बुद्धको शरणमा बित्यो। दुई वर्षपछि जब बुद्धले मलाई के प्रश्न छ सोध भन्नुभयो, त्यो बेलासम्म मसँग प्रश्न, जिज्ञासा, केही बाँकी थिएन। त्यसैले अहिले सोधिहाल, नभए तिम्रो हालत मेरोजस्तै हुन सक्छ।'
गहिरो मौन साधनामा मौलुंकपुत्त बसे।
एकदिन बुद्धले अचानक मौलुंकपुत्तलाई भने- दुई वर्ष बितिसक्यो। अब सोध के सोध्नुछ ईश्वरका बारेमा?
मौलुंकपुत्तले भने, 'महाकश्यपले ठीक भनेका थिए, मेरो मनमा सोध्न कुनै प्रश्न नै बाँकी रहेन अब। न ईश्वरको बारेमा न आत्माका बारेमा। मेरो चित्त शून्य र शान्त भइसक्यो। अब केको प्रश्न, केको वादविवाद?'
मौन बसेर अर्थात ध्यान बसेर मौलुंकपुत्तले आफ्नो समाधन पाए, ईश्वरबारे प्रश्नको अब उनको जीवनमा कुनै प्रायोजन नै छैन।
धम्मपद श्लोक १६० (अत्तवग्गो ४) 'अत्ताहि अत्तनो नथो, को हि नाथो परो सिया; अत्तनां व सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं।'
अर्थात् आफ्नो स्वामी आफैं हो, अरू को हुनसक्छ? चञ्चल चित्तलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गरेर यो दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त हुन्छ। ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार गर्ने हो भने मान्छे आफ्नो मालिक आफैं भन्ने सिद्धान्तको विरोध हुन्छ। मानिसले सत्यको खोज पनि छाडिदिन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ७, २०७८, १४:२२:००
संघर्षका लागि संकल्पको दिन